Mpanamboatra sy mpamatsy «Fuse» China Fuse Factory
Fiarovan'ny XRNT backup
Ny interrupter magne X dia ampiasaina amin'ny andian-tsarimihetsika miaraka amina fitaovana fiarovana voalohany ambany toy ny Bay-o-net Fuse na Magne X The magne X interrupter. Ny fizarana magne X mahomby indrindra izay mametra ankehitriny dia mampihena ny vokatry ny tsindry mavesatra be loatra ankehitriny amin'ny fitaovana sy ny rafitra fizarana. na izany aza, ny laharana fanelingelenana faran'izay avo indrindra dia hanadio ny avo indrindra ...
Tariby SMRS Fuse
Ny tariby fikorisa indroa dia ampiasaina amin'ny fivorian'ny fiangonan'ny Bay O-net hiarovana ny fitaovana fizarana endrika manimba ny onja ary hiarovana ny rafitra fizarana amin'ireo fitaovana tsy nahomby. Ny tariby fikorontanana indroa dia tsy ny lesoka faharoa ihany, ny onja mavesatra be ary ny hafanan'ny tsiranoka mpanova. Hoferan'izy ireo ny fanafanana maharitra mandritra ny fotoana maharitra ateraky ny be loatra sy ny tontolon'ny mari-pana avo lenta Rating Overview: Voltage Maximum Single-Phase Interrupting Rating Cover Mount Assembly (rm asymmetrical) ...
bay o tompon'ny fuse net
Ny Assembly of Bay-o-net dia singa fohy amin'ny mpanova menaka, hiarovana ireo fitaovana rehefa mandeha ny fotoana. Rehefa apetraka ao aminy ny tariby fuse, ny Bay-o-net dia hanome fiarovana azo antoka sy tena mahomby, araka ny toetr'andro, ny hafanan'ny solika. Ny Assembly an'ny Bay-o-net dia mety amin'ny tariby fuse sensing amin'izao fotoana izao, tariby fuse dual sensing, tariby fuse element roa, ary ELSP izay mametra fuse backup sns. Izy io dia mety amin'ny rafitra herinaratra avo lenta miaraka amin'ny onjam-pahefana 50HZ, volta mahazatra ...